A320 मेगा परिवार प्याक - A321 ढोका खोल्न छैन?
प्रश्न A320 मेगा परिवार प्याक - A321 ढोका खोल्न छैन?
1 वर्ष 1 महिना पहिले #1092 by BlueSwurl
प्रत्येक अन्य विमान पैक मा ठीक छ A321 को लागि, म केवल मुख्य दरवाजे खोल सकते हो, के यो एक फिक्स छ?
1 वर्ष 1 महिना पहिले - 1 वर्ष 1 महिना पहिले #1094 by DRCW
नमस्ते, पूर्वनिर्धारित A321 बाट [EXITS] खण्ड प्रतिलिपि गर्नुहोस् र मेगा प्याकेजमा A321 मा त्यो खण्ड बदल्नुहोस्! यदि तपाईले कदम उठाएको छ भने मलाई थाहा छ। यसलाई सजिलो बनाउन, यहाँ छ कि सेक्शन छपाई छ। प्रतिलिपि र टाँस्नुहोस्
बाहिर निस्कनुहोस् (0 = मुख्य 0.4 = कार्गो 45.50 = आकस्मिक), बाहिरको एक्सटेन्सन (6.0 = 7.0 =0= 0, 1, -2, XNUMX, XNUMX / OPenclose rate percent per second, Longitudinal,
बाहिर निस्कनुहोस् (1 = मुख्य 0.4 = कार्गो 33.50 = आकस्मिक); बाहिर निस्कनुहोस् (5.85 = 0.0 = 1 = 0, -1, 2, XNUMX, XNUMX // OPenclose rate percent per second, longitudinal,
बाहिर निस्कनुहोस् (2 = मुख्य 0.4 = कार्गो 29.90 = आकस्मिक), बाहिरको एक्सटेन्सन (6.0 = 1.0 =2= 0, 1, 2, XNUMX, XNUMX // OPenclose rate percent per second
अन्तिम सम्पादन: 1 वर्ष 1 महिना पहिले DRCW.
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.178 सेकेन्ड